Any Questions? ရှမ်းပြည်နယ် အစီအစဉ် (ပထမပိုင်း) | DVB
Any Questions? Lead Story ဆောင်းပါး ဆွေးနွေးခန်း မေးမြန်းခန်း ရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ
Any Questions? ရှမ်းပြည်နယ် အစီအစဉ် (ပထမပိုင်း)
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် ပါတီတွေကို ပထမဆုံးအကြိမ် မဲပေးကြမယ့် First time voters လူငယ်တွေက သူတို့သိလိုသမျှတွေကို မေးမြန်းပြီး ပါတီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမယ့် Any Questions? အစီအစဉ်ကို DVB TV ကနေ တင်ဆက်ပေးနေရာမှာ ဒီတပတ်မှာ ရှမ်းပြည်နယ် အစီအစဉ် ပထမပိုင်းကို တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ရသလို၊ ရှမ်းလို မိုင်ဆွန်ခ လို့လည်း နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေ ခင်ဗျာ။ ရှမ်းပြည်နယ်ဆိုတာ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အားလုံးထဲမှာ ဧရိယာအကျယ်ပြန့်ဆုံး ပြည်နယ်တစ်ခု။ ရှမ်းကုန်းပြင်မြင့်၊ မောမြေ၊ အရှေ့ရိုးမ၊ ကမ္ဘောဇတိုင်းလို့လည်း အမျိုးမျိုး ခေါ်ကြတာပေါ့။ ဧရာဝတီကမ်းဘေးကနေ အရှေ့ဆီကို မျှော်ကြည့်လိုက်ရင် တောင်ခိုးတောင်ငွေ့တွေနဲ့ ငွေနှင်းမြူမှုန်တွေ ရစ်သိုင်းလို့ မှိုင်းမှိုင်းညို့ညို့ မို့မို့ဆိုင်းပြီး မြင်ရသူအဖို့ ရင်ခုန်လှိုက်မောဖွယ်ရာ နေရာတစ်ခုပါပဲ။ တောင်တန်းတောင်စွယ်တွေကလည်း တအိအိလူးလွန့်လို့ နိမ့်တုံမြင့်တုံ အနိမ့်အမြင့် အမို့အမောက် အချိုင့်အဝှမ်းတွေနဲ့ တင့်တယ်လွန်းလှပါတယ်။
ခပ်ကြမ်းကြမ်း စီးဆင်းနေတဲ့ ရှမ်းလို နမ့်ခုမ်းလို့ခေါ်တဲ့ သံလွင်မြစ်၊ လာအို – မြန်မာ နယ်နိမိတ်သဖွယ် ပိုင်းခြားထားတဲ့ မဲခေါင်မြစ်ကလည်း ရှမ်းပြည်နယ်အလှကို တင့်မောဖွယ်ရာ ခြယ်သပေးနေသလိုပါပဲ။ အခြားလူမျိုးစုတွေကတော့ သူတို့ကို ရှမ်းလို့ခေါ်ပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ (TAI) တိုင်း လို့သုံးပါတယ်။ ရှေးမြန်မာ ကျောက်စာတွေကတော့ သ ယပင့် ဟထိုး မသတ် ဝစ္စနှစ်လုံးပေါက် သျှမ်းလို့ ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်အစ မိုင်းမောကလို့ ဆိုစကားကလည်း မိုင်းမောကတစ်ဆင့် စော်ဘွားကိုးနယ်ရဲ့ ကိုးဆက် ဖြစ်လာခဲ့တာ။ ကုန်းဘောင်စော်ဘွား ခွန်မှိုင်းကြီး၊ အဝထီးနန်းအုပ်စိုးချိန်မှာ ညီတော်၊ သားတော်ထဲက တချို့ကို ရှမ်းမြို့တွေမှာ အုပ်ချုပ်ဖို့ ခန့်အပ်ထားခဲ့တယ်။ သူတို့ကို ရှမ်းလို စောဝ်ဖအဲဒီလိုခေါ်ရာက အနီးစပ်ဆုံး မြန်မာအသံဖလှယ်လိုက်တော့ စော်ဘွားရယ်လို့ ဖြစ်လာခဲ့တာ။
ရှမ်းပြည်နယ်ဟာ ၁၃ ခရိုင်၊ ၅၅ မြို့နယ်နဲ့ မြို့ပေါင်း ၈၆ မြို့ ရှိတာကြောင့်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်ကို ရှမ်းမြောက်၊ ရှမ်းတောင်နဲ့ ရှမ်းအရှေ့ဆိုပြီး ခွဲခြားပြောကြပါတယ်။ ရှမ်းမြောက်ရဲ့ မြို့တော်အဖြစ် လားရှိုး၊ ရှမ်းအရှေ့ရဲ့ မြို့တော်အဖြစ် ကျိုင်းတုံနဲ့ ရှမ်းတောင်ရဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်ကတော့ တောင်ကြီးမြို့ပါပဲ။ ၁၈၉၄ ခုနှစ်မှာ အင်္ဂလိပ်တို့ စတင်ရုံးစိုက်ရာက တောင်ကြီးလို့ ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတာ။ တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ရဲ့ မီးပုံးပျံပွဲတော်ကတော့ မြန်မာတပြည်လုံးမှာ တစ်ခုတည်းသော အထင်ကရ ပွဲတော်ကြီးပါပဲ။
ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လက်လှမ်းမီသလောက် ရှာဖွေထားတဲ့ အချက်အလက်လေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ ၁၂ နေရာ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ၅၅ နေရာနဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ ၁၁၇ နေရာရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ ၂၀၁၅ တုန်းက ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီမြေပုံလေးမှာ ပြထားတာဆိုရင် မြို့နယ် ၇ ခုမှာ မကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ ဒီပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ မြို့နယ်ဆယ်ခုက ကျေးရွာအုပ်စု ၁၀၆ စုမှာလည်း မကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ၇ နေရာ လစ်လပ်နေခဲ့တယ်၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်မှာ ၁၄ နေရာ လစ်လပ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ပါတီအလိုက်ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဆိုရင် ၂၆ ပါတီ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တယ်၊ ၇ ပါတီကတော့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၁၉ ပါတီကတော့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပါတီကတော့ ၅ ပါတီ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပါတီက ၂၅ ပါတီရှိပြီးတော့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီက ၇ ပါတီ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ရှမ်းပြည်နယ်မှာ မဲဆန္ဒရှင်လူဦးရေက ၃၁ သိန်းကျော် ရှိပြီးတော့ မဲပေးခဲ့တဲ့ လူဦးရေကတော့ သိန်း ၂၀ ကျော် ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဖို့ ပါတီတွေကိုဖိတ်ဖို့အတွက် အွန်လိုင်းပေါ်က စစ်တမ်းတွေရယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဒေသတွေမှာ လိုက်ပြီးတော့ လက်လှမ်းမီသမျှ စစ်တမ်းတွေ ကောက်ယူခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီဒေတာ အချက်အလက်တွေအရ၊ ရလဒ်တွေအရ ပါတီတွေကို ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ဖိတ်ခဲ့တဲ့ ပါတီတွေကတော့ ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်တို့ပါ။ အဲဒီတော့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ဖိတ်ထားတဲ့ ပါတီက ဆရာတွေက တစ်ဦးကို ၂ မိနစ်စီလောက် မိတ်ဆက်စကား ပြောပေးထားပါတယ်။
ဓနုပါတီက ဦးခင်မောင်ချို၏ မိတ်ဆက်စကား
အခုလာမယ့် ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် မဲပေးကြမယ့် ညီငယ်၊ ညီမငယ်များအားလုံး မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီရဲ့ ပါတီဗဟိုဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ချို ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပါတီကို လူအများဆုံး နေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ ရွာငံ မြို့နယ်၊ ပင်းတယမြို့နယ်၊ ကလော မြို့နယ်၊ နောင်ချိုမြို့နယ်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်တို့ကို အခြေခံပြီးတော့မှ ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ပါတီအနေနဲ့ ဒီလာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၂ ယောက် ပါတီ ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အခု ညီငယ်တွေကို ကျနော်ပြောချင်တာကတော့ ဒီနေ့ လူငယ်တွေဟာ နောင်အနာဂတ်မှာ မိမိတို့ဒေသ၊ မိမိတို့လူမျိုး၊ မိမိတို့တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်ဦးရွက် ပြုကြမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအရွယ်ကတည်းက နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားဖို့၊ လေ့လာလိုက်စားဖို့လိုပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကောင်းရင် တိုင်းပြည်ကောင်းပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကောင်းဖို့ နိုင်ငံရေးသမားကောင်းတွေ ထွက်လာဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပဲ ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးကြမယ့် ညီငယ်၊ ညီမငယ်တွေ အသဲကြားက မဲတစ်ပြားကို နိုင်ငံရေးသမားကောင်းတွေအတွက်ပဲ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုအပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်က ဦးခွန်စိုးမြင့် မိတ်ဆက်စကား
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ကျနော်ကတော့ ပြည်ထောင်စု ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ပ.အ.မ.ဖ) ပါတီရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ခွန်စိုးမြင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ကျနော်တို့ပါတီနဲ့ မြန်မာပြည်အဝှမ်းမှာ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အဝှမ်းမှာ ရှိတဲ့လူငယ်တွေ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ဒီဗွီဘီ Any Questions? အစီအစဉ်ကိုလည်း အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စု ပအိုဝ်းအမျိုးသားများအဖွဲ့ချုပ် ပါတီရဲ့ သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်လေးကို ဒီကလူငယ်တွေ သိရအောင်လို့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စု ပအိုဝ်းအမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် (ပ.အ.မ.ဖ) ပါတီကတော့ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့မှာ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ပါတီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မူလရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျနော်တို့ ၆ ချက်ရှိပါတယ်။
နံပါတ်တစ်က ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ အခွင့်အရေးရရှိရေး၊ နံပါတ် နှစ်က ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ရေး အခွင့်အရေး၊ နံပါတ်သုံးက အမျိုးသားစာပေယဉ်ကျေးမှုနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးထွန်းကားရေး၊ နံပါတ်လေးက လူမျိုးပေါင်းစုံပေါင်းစည်းညီညွတ်ခြင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးနဲ့ နံပါတ်ငါးကတော့ မတရားသော စနစ်ဆိုး တိုက်ဖျက်ရေး စတဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်နှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန် စတဲ့အချက်များနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ရေး စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စုပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ပ.အ.မ.ဖ) ပါတီဟာ ကျနော်တို့ ပြန်ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ မျိုးဆက်သုံးဆက် ရှိခဲ့ပြီဆိုတဲ့ဟာကို မှတ်တမ်းအရ လေ့လာသိရှိရပါတယ်။ ဒါကတော့ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ကတော့ ပထမမျိုးဆက်လို့ ခေါ်ဆိုရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ကျနော်တို့ ၂၀၁၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စု ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ပ.အ.မ.ဖ) ပါတီအနေနဲ့ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်နိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက် အရွေးခံနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ သို့ပေမယ့်လည်း ၂၀၁၃ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ကျနော်တို့ တတိယမျိုးဆက်လို့ခေါ်တဲ့ ကျနော်တို့လူငယ်တွေကနေ စပြီးတော့ ပါတီ မှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့ လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ၂၀၁၄ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ပါတီမှတ်ပုံတင်နိုင်ခွင့် ရခဲ့ပြီးတော့မှ ပါတီရဲ့ မှတ်ပုံတင်အမှတ်စဉ်ကတော့ ၇၃ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ပါတီရဲ့ ဖြစ်စဉ် သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းလေးကို ပြောပြချင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျနော် လူငယ်တွေကို တိုက်တွန်းအားပေးချင်တာကတော့ ဒီ လာမယ့် ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးက ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်မတန်မှ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တိုင်ထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပထမဆုံးအကြိမ် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိမယ့် လူငယ်တွေအနေနဲ့ သိထားရမှာကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆန္ဒမဲပြားက ကျနော်တို့တိုင်းပြည်၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံ၊ ကျနော်တို့မြို့နယ်၊ ကျနော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အနာဂတ်ကို အပြောင်းအလဲပေးနိုင်မယ့် မဲပြားဆိုတဲ့ဟာကို ကျနော့်အနေနဲ့ သိထားစေချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အားလုံးမဲပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးစိုင်းကျော်ညွန့် မိတ်ဆက်
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ကျနော်စိုင်းကျော်ညွန့်ပါ။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ၁ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပါတီကတော့ ရပ်ထဲရွာထဲဆိုရင်တော့ ကျားခေါင်းပါတီလို့ ခေါ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ပါတီ စတင်တည်ထောင်စတုန်းကတော့ ကျနော်တို့ပါတီထဲမှာ ရှမ်းလူမျိုးတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားအခြားသော လူမျိုးတွေလည်း အများကြီးပါပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒုဥက္ကဋ္ဌဆိုရင်၊ တအာင်း (ပလောင်) အမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်။ စတင်တည်ထောင်စတုန်းက။
ပြီးတော့ ၁၉၉၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျနော်တို့က မြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာ ဒုတိယအနေနဲ့ အနိုင်ရရှိမှု အများဆုံးရတဲ့ ပါတီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ၂၀၁၅ မှာတော့ ကိုယ်စားလှယ် ၄၀ ဦး အနိုင်ရရှိပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာကော၊ ပြည်နယ်အဆင့်မှာကောပေါ့နော်။
ဒီ ကြားဖြတ် ၂၀၁၇ တို့၊ ၁၈ တို့ ထပ်ပြီးယှဉ်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့ ထပ်မံအနိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် မို့လို့ ၄၆ ဦး ရှိပါတယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များပေါ့လေ၊ လက်ရှိ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ပါတီကို အများအားဖြင့် လူတွေနားလည်ထားတာက ရှမ်းလူမျိုးတစ်ခုတည်းနဲ့ ဖွဲ့စည်းတဲ့ပုံစံလိုဖြစ်နေတယ်။ ဆိုတော့ တကယ်တမ်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့က ဒီရှမ်းပြည်မှာရှိတဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံက နဂိုကတည်းက ပါဝင်ခဲ့ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ မှာ ရှိတဲ့ ပါတီညီလာခံမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ ပါတီကို လူမျိုးအခြေစိုက်ပါတီကနေ၊ ပြည်နယ်အခြေစိုက် ပါတီပေါ့ဗျာ။ ပြည်နယ်အခြေပြု ပါတီအဖြစ် ပြောင်းလဲမယ်ဆိုပြီးတော့ မူဝါဒ ချမှတ်ခဲ့တာ ရှိတယ်။ ဒီအတိုင်းကိုလည်း လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေတာ ရှိပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ပြည်နယ်အခြေပြုအပြင်၊ မူဝါဒအခြေပြုတဲ့ ပါတီဖြစ်အောင်လည်း ကျနော်တို့ လုပ်ဆောင်နေတာ ရှိပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ကျနော်တို့ပါတီမှာ ကျနော်တို့ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကို လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ တစ်ပိုင်းက Institution Building ပေါ့ဗျ။ ကျနော်တို့ပါတီရဲ့ အင်စတီကျူးရှင်း အဖွဲ့အစည်းကို စည်းစနစ်ကျနတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဟာတွေနဲ့အတူ ဒါကိုမူဝါဒတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ကျနော်တို့ဒီ မြို့နယ်အဆင့်မှာဆိုရင် အမျိုးသမီး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါရမယ်။ အနည်းဆုံးပေါ့။ လူငယ် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း အနည်းဆုံးပါရမယ်ဆိုတဲ့ အခုလက်ရှိမှာ မြို့နယ် မြို့နယ်တွေနဲ့ ၂၀၁၈ ကနေ စပြီးတော့ လုပ်လာလိုက်တာ မြို့နယ်တော်တော်များများမှာ လူငယ်နဲ့ အမျိုးသမီး ပါဝင်မှုနှုန်းက တော်တော်မြင့်ပါတယ်။ ဘယ်မှာပါလဲဆိုတော့ မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီမှာ ပါဝင်ခိုင်းခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းညွှန်နဲ့အညီပေါ့ဗျာ။
နောက်ပြီးတော့ အခု ၂၀၁၈ အစောပိုင်းကနေစပြီးတော့ ကျနော်တို့ မူဝါဒတွေ လုပ်ဆောင်လာတာ၊ ရေးဆွဲလာတာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ မူဝါဒကို အခုမှာ မူဝါဒ ၁၇ ခုလောက် ရေးဆွဲပြီးပါပြီ။ တောက်လျှောက်လည်း ပြည်သူလူထုကို တင်ပြသွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ မကြာခင်အချိန်ရက်အတွင်းမှာ အကြမ်းဖျဉ်းလောက်က လာမယ့် ၁၀ ရက်နေ့လောက်မှာဆိုရင် ကျနော်တို့ မူဝါဒလမ်းစဉ်ပေါ့ဗျာ၊ ကျနော်တို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ မူဝါဒလမ်းစဉ်ကို မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဝင်းဝင်းနွယ် မိတ်ဆက်စကား
ဟုတ်ကဲ့၊ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါနော်။ ကျမကတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ထဲမှာဆိုရင် အဲဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကမှ အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီ မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးမှာ ဆိုရင်လည်း တွဲဘက် တာဝန်ခံအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကိစ္စအဝဝတွေကို ကျမတို့က ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ ပါတီကြီးရဲ့ ဗဟိုကနေ ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၊ မူဝါဒ၊ သဘောထားတွေ၊ ဘောင်တွေထဲကနေ မချိုးဖောက်ဘဲနဲ့ ကျမတို့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုး ရှိတဲ့အနက် ဘယ်တိုင်းရင်းသားကိုမှ မသွေဖယ်ထားဘဲနဲ့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပါဝင်ထားတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ဖို့အတွက်လည်း ကျမတို့က အစဉ်တစိုက် ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးလည်း သိပါတယ်။
ဒီထဲမှာ ကျမတို့က ရည်မှန်းချက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ အလုပ်သမားတွေ၊ တောင်သူလယ်သမားတွေ၊ ကုန်သည်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ၊ တတ်သိပညာရှင်တွေအပြင်၊ အနုပညာရှင်များ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၊ လူထုလူတန်းစား အသီးသီးတို့ရဲ့ ပြည်သူတို့ကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ ပေါင်းချုပ်ကြီးတစ်ခုလိုလည်း ကျမတို့က လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီလိုပါတီကို ထူထောင်ထားခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအချက်ကို အကြောင်းပြုပြီးတော့မှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၊ National League for Democracy ဆိုပြီးတော့မှ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းနဲ့အညီ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေအမှတ် ၄/ ၈၈ အရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း အက်ဥပဒေအမှတ် ၂/ ၂၀၁၀ ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ကျမတို့ပါတီကြီးရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြောပြတဲ့နေရာမှာ အားလုံးဟာ အခု မည်သည့်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးဟာ ကျမတို့ရဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးက ကိုယ်ယုံကြည်ရာ လမ်းကို လျှောက်နေကြသော်လည်း ၅ နှစ်တစ်ခါမှ မဲပေးရတဲ့ ပါတီစုံအထွေထွေဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲကြီးအတွက် မိမိယုံကြည်ရာပါတီ၊ မိမိယုံကြည်ရာစနစ်နဲ့ တည်ထောင်ထားတဲ့ပါတီကို မဲပေးရင်းနဲ့မှ နိုင်ငံသားတာဝန်ကို ကျေပွန်ကြပါစေလို့ ပြောကြားရင်းနဲ့ မိတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခု ပါတီမိတ်ဆက်စကားတွေ ပြောပေးသွားတဲ့ ပါတီအသီးသီးက ကိုယ်စားလှယ်တွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခု ကျမတို့ ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ အဓိကဖြစ်တဲ့ ကလေးတွေ၊ First time voters လူငယ်တွေရဲ့ ကဏ္ဍကို စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ မေးခွန်းမေးမယ့်လူငယ်တွေကလည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရောက်နေကြပါပြီ။
လမင်းထွေး- မေး။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို ကျနော်မေးချင်တယ်ဗျ။ ကျနော်တို့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကို သူတို့ရဲ့ ပညာရေး၊ သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတွေကို၊ အခု ကိုဗစ်ကာလလည်း ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ သူတို့အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ပေးမှာလဲပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို မေးထားတယ်ပေါ့နော်။ ဖြေပေးပါဦးရှင့်။
NLD ဒေါ်ဝင်းဝင်းနွယ်- ဖြေ။ ။ ဒီ ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုတာက ကမ္ဘာနဲ့တဝန်းလုံး ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကပ်ရောဂါဘေး တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျမတို့ရဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ၊ ပြည်ထောင်စု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအလိုက် သူက ကျောင်းသားတွေကော၊ အနုပညာနယ်ပယ်တွေကော မကျန်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးတော့ ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေ တွေ့ရပါတယ်။ အားလုံး ပြည်သူလူထုအားလုံးလည်း တွေ့ရပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဒီလိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေရာကနေ ကျောင်းတွေလည်း ပြန်ဖွင့်နိုင်အောင်၊ အားချင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ဒီရောဂါကပ်ဘေးကြီးက ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ ပြန်စပြီး တိုးလာတဲ့သူကို ရုတ်တရက် ပြန်တွေ့လာရတာလည်း ရှိပါတယ်။ ရှိပင် ရှိသော်ငြားလည်း Private ကျောင်းတွေကနေပြီးတော့မှ အွန်လိုင်းကွန်ဖရန်းစင်းနဲ့ သင်နေတဲ့ဟာတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒါက အင်တာနက်တွေကောင်းမယ်၊ တတ်နိုင်တဲ့သူတွေ အနေနဲ့ သင်ကြားနေတာတွေလည်း ရှိမယ်။
တစ်ခါ၊ အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ကျတော့ အဲဒါက မရှိပြန်ဘူး။ မရှိပြန်တော့ အွန်လိုင်းကွန်ဖရန်းစင်းနဲ့ သင်မယ်ဆိုလည်း အဆင်ပြေနိုင်မှု မရှိဘူးဆိုတာကို ကျမတို့က သိပါတယ်။ သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အသက်မွေးပညာ ကျောင်းတွေကို အခုမှမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့လို နေရာမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှ အဆင့်ဆင့် အမြဲတမ်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကို ဖော်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့၊ မူဝါဒထဲမှာလည်း ပါထားတဲ့အနေနဲ့ တစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ် ခေါ်ယူနေပါတယ်။ ဒါကိုတချို့သောလူငယ်တွေ မသိတာလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို မသိရင် ကျမတို့ပါတီနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကနေလည်း ဒီလိုဖောင်ဒေးရှင်းတွေကို ရိုက်ပြီးတော့ ဘယ်နှတန်းအောင်ရင်ရပါတယ်၊ အတန်းပညာက ဘွဲ့ရမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့ ပါတီရဲ့ မူဝါဒမှာ ၈ တန်းအောင်ရင် ဘာလုပ်လို့ရတယ်၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်မှာလား၊ ဝါသနာပါတာလား၊ သူ့ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်တွေကို လိုက်နာပြီးတော့ သင်တန်းတွေကို လျှောက်လို့ရပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခက်အခဲ ရှိနေရင် ဒီလူငယ်တွေကို ကျမတို့ပါတီက ကူညီဖို့ အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း အမြဲတမ်း၊ ရပ်/ကျေး ရုံးတွေပေါ့နော်၊ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာလည်း ရပ်/ကျေးရုံးတွေကို ဖွင့်ထားတယ်။ အဲဒီကနေတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှ ကျမတို့က သင့်တော်တဲ့ကျောင်းမျိုးတွေ၊ ကလေးကလည်း ဝါသနာပါမယ်၊ သင်ကြားပေးတဲ့ကျောင်းရဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့လည်း ကိုက်ညီမယ်ဆိုရင် ကျမတို့က ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒါက ပြည်သူကို ပြည်သူက ကူညီခြင်း အစီအစဉ်ပါပဲ။ ဘယ်လိုပြည်သူမျိုးကို ကူညီမယ်၊ ဘယ်လိုလူငယ်မျိုးကို မကူညီဘူးဆိုတာမျိုးကို ကျမတို့က မကန့်သတ်ထားပါဘူးရှင့်။
မျိုးမင်းလတ်- မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျနော်မျိုးမင်းလတ်ပါ။ မေးချင်တာကတော့ ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီ ပါတီကိုပေါ့နော်။ ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီ ပါတီအနေနဲ့ အနိုင်ရခဲ့လို့ရှိရင် စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ နိုင်ငံတော်ကို ထူထောင်နိုင်ပါသလား။ ပြီးတော့ နောက်ထပ် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကိုကော ပြင်ဆင်နိုင်မယ့် အခြေအနေရှိလားပေါ့။
ဓနုပါတီ-ဖြေ။ ။ ၂၀၀၈ ခြေဥကို ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကတော့ ကျနော်တိုတိုပြောရမယ်ဆိုရင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဟာ တပ်မတော်သားမှ သဘောမတူရင် ကျနော်တို့ ဓနုတိုင်းရင်းသားဒီမိုကရေစီ ပါတီမှ မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်ပါတီမှ ပြင်လို့မရနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးပါ။ အဲဒီတော့ တကယ်လို့ ပြင်လို့ရနိုင်တဲ့အားလုံး၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံး စဉ်းစားနေတဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ၊ ၂၁ ရာစု ပင်လုံနဲ့ နောက် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အစိုးရကရော၊ လွှတ်တော်ရော၊ ကျနော်တို့ ပါတီတွေရောပေါ့လေ၊ ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အားလုံး ဒီ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံမှာ တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုသွားကြမယ်ဆိုတဲ့ ကောင်းတဲ့၊ မြန်တဲ့၊ အားလုံးညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းနဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတော့မှ သဘောတူညီချက်တွေ ရယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အားလုံး၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံး အဖက်ဖက်က ကျေနပ်တဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ဓနုတိုင်းရင်းသား ဒီမိုကရေစီ ပါတီမှမဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ် ပူးပေါင်းပြီးတော့မှ ၂၀၀၈ ခြေဥကို ပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ကတော့ အားလုံး ဒီအချိန်မှာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင် နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံး၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံး၊ တပ်မတော်အပါအဝင် တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းစေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအခြေခံဥပဒေကြီးကို ပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ အနေအထားအရတော့ ဘယ်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း (၁၂)၊ ၄၃၆ အရဆိုရင် တပ်မတော်က သဘောမတူရင် ပြင်လို့မရတဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ လွှတ်တော်ထဲက ဒီလိုမရဘူး ဆိုရင် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ၊ ၂၁ ရာစု ပင်လုံဟာ ခြေဥကို ပြင်ဖို့အတွက် ကောက်ရိုးတစ်မျှင်များ ဖြစ်မလားဆိုတာကို ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးက မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မယ်ရီမွန်းခေါန်- မေး။ ။ ကျမမေးချင်တာကတော့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို မေးချင်ပါတယ်။ ကျမတို့အားလုံး သိထားတဲ့အတိုင်းပဲ ရှမ်းပြည်နယ်ဟာဆိုရင် တိုင်းရင်းသားလည်း ပေါင်းစုံနေထိုင်တယ်။ နောက်တော့ တိုင်းရင်းသားပါတီ များစွာလည်း ရှိတယ်ပေါ့။ SNLD အနေနဲ့ အလုပ်အမှုဆောင်မှာရော၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမှာရော၊ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေ ပါဝင်တဲ့အတွက်လည်း ကျမ ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်။ ကျမမေးခွန်းက ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖွဲ့ခဲ့မယ်ဆိုပါက ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းက တခြားတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ ဘယ်လို ပူးပေါင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ မူဝါဒရှိပါသလား။ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မူဝါဒချမှတ်ထားတာမျိုး ရှိပါသလား။
SNLD- ဖြေ။ ။ ညွန့်ပေါင်းဆိုတာက ဒီ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကနေ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲ ၅၀ ကျော် ရာခိုင်နှုန်း မနိုင်ဘဲနဲ့၊ ၅၀ ကျော် ရာခိုင်နှုန်းက ပါတီကြီးတစ်ခုက မနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ မနိုင်ဘူးဆိုရင် သူက အခြားအခြားသော ပါတီတွေနဲ့ ဘယ်လိုပူးပေါင်းမလဲပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပူးပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံကလည်း သူက ညွန့်ပေါင်းပုံစံစစ်စစ်ကြီးလို့လည်း သူက သိပ်ပြောလို့မရဘူး။
ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်း တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ နေထိုင်တယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ပါတီရဲ့ မူဝါဒ သဘောထားကတော့ ကျနော်တို့က ရှမ်းပြည်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအားလုံးကို တပြေးညီတည်းပဲ ကျနော်တို့က တန်းတူညီတူထားတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ ကျနော်တို့ပါတီအနေနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု လုံးဝမရှိဘူး။ ကျနော်တို့သာ တကယ်လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာရော၊ ပြည်နယ်အဆင့်မှာရော သူက တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပါဝင်တဲ့ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဆိုတာထက်ဗျာ၊ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး အစိုးရဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးကို ကျနော်တို့က ဖွဲ့ချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ ကျနော်ကိုယ်တိုင်သာ သမ္မတ ဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာ အဲဒီလိုမျိုး အစိုးရကို ကျနော်ဆိုရင်တော့ တကယ်လုပ်မှာ ဖြစ်တယ်။ မပျက်မကွက် လုပ်မယ်လို့လည်း ကျနော်တို့က မြင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ တခြားလူတွေ သမ္မတဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း အဲဒီ တခြားတခြားသော လူတွေက အခုလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေ၊ အစိုးရဖွဲ့စည်းရေး ကိစ္စတွေမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အရှည် အနာဂတ်ကို ရည်မျှော်တဲ့၊ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး အစိုးရကို ဖွဲ့စည်းကြပါလို့ ကျနော့်အနေနဲ့တော့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
အခု မေးခွန်းတွေ မေးပေးသွားသူတွေ၊ ဖြေပေးခဲ့တဲ့ ပါတီဘက်က ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ နောက်ပြီးတော့ Any Questions? အစီအစဉ် ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အဘက်ဘက်က ကူညီပေးကြတဲ့သူ အားလုံးနဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံကို ကြည့်ရှုနေတဲ့ ပရိသတ်တွေကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို အပိုင်းလေးပိုင်းခွဲပြီးတော့ သောကြာနဲ့ စနေနေ့တွေမှာ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
Tags: Any Questions?First time votersရှမ်းပြည်နယ် အစီအစဉ် (ပထမပိုင်း)
Previous story ပြင်သစ်၌ ရေကြီးစဉ် တံတားတစင်း ပြိုကျပြီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သည့်ရုပ်သံ ထွက်ပေါ်
Next story ပြည်ထောင်စုပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ တောင်ကြီးမြို့၌ မဲဆွယ်စည်းရုံး